China Attic Shuttle orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1. Attic Shuttle System dia karazana vahaolana fitahirizana mandeha ho azy tanteraka ho an'ny daba sy baoritra.Afaka mitahiry entana haingana sy araka ny tokony ho izy izy io, mitana toerana kely fitahirizana, mila toerana kely kokoa ary amin'ny fomba malefaka kokoa.
2. Ny fiara fitateram-bahoaka ao amin'ny efitra ambanin'ny tafo, miaraka amin'ny garderie azo afindrafindra sy azo averina, dia mandeha eny amin'ny racking mba hahatsapana ny fampidinana sy fampidinana amin'ny ambaratonga samihafa.
3. Ny fahombiazan'ny fiasan'ny Attic Shuttle System dia tsy ambony noho ny rafitra Multi Shuttle.Noho izany dia mety kokoa ho an'ny trano fanatobiana entana tsy mila fahaiza-manao avo loatra, mba hitsitsiana ny vidiny ho an'ny mpampiasa.
①Karazana entana inona no mety amin'ny Rafitra fitehirizana ny Attic Shuttle?
Karazana fonosana entana: Baoritra, baoritra, kitapo sns.
Lanja entana: Sakany 400, Halany 600, Haavo 100-400mm
tsara refy (mm): <=35kg
Haavo fiasana <=3m
Haingana, lafo vidy.
Fepetra ambany momba ny firafitry ny trano fanatobiana entana, ny haavon'ny trano ary ny fitakiana ny gorodona.
Tsy mila lalamby ambony sy gorodona, rafitra racking tsotra.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny fitahirizana, fanangonana ary famenoana entana kely sy isan-karazany.
Vahaolana mahomby ho an'ny fitahirizana vonjimaika sy ny asa fanohanana eo amin'ny sisin'ny tsipika famokarana.
③Design, Test & Warranty
Ny famolavolana maimaim-poana dia azo omena miaraka amin'ireto fampahalalana manaraka ireto.
Era fitehirizana trano fitehirizana Hala____mm ​​x Sakany____mm ​​x Haavo mazava___mm.
Donga/baoritra Halava____mm ​​x Sakany____mm ​​x Haavo___mm ​​x Lanja_____kg.
Ny maripana ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra_____Degrees Celsius
Fahombiazana miditra sy mivoaka: Habetsan'ny daba / baoritra isan'ora_____
Ny Attic Shuttle dia hotsapaina alohan'ny fanaterana.Ny injeniera dia hitsapa ny rafitra manontolo amin'ny tranokala na amin'ny Internet.
Warranty dia herintaona.Valiny haingana ao anatin'ny 24 ora ho an'ny mpanjifa any ivelany.Andramo aloha an-tserasera ary amboary, raha tsy afaka manamboatra an-tserasera, ny injeniera dia handeha hamaha ny olana eo an-toerana.Ny piesy maimaim-poana dia homena mandritra ny fotoana fiantohana.
teo aloha: T-Post Shelving
Manaraka: Fanaterana fiara mandeha amin'ny lalana efatra
Baby Shuttle, Conveyor, Carton Live, Drive amin'ny Racking, Asrs Storage, Shuttle amin'ny lalana efatra,